Baaqashada kulamadii hore oo xiisa u yeeleysa Kulanka Golaha Shacabka ee maanta – Kalfadhi
Baaqashada kulamadii hore oo xiisa u yeeleysa Kulanka Golaha Shacabka ee maanta
Kadib kulamo isdaba-joog ahaa oo ay Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ku yeelanayeen Muqdisho, gaar ahaan Filla Hargeysa, ilaa 1-dii bishan, ayaa la go’aamiyey in lagu dhawaaqo inuu maanta dhaco Kulanka 30-aad ee Golaha Shacabka oo baaqanayey waqti ka badan hal todobaad, sida ay Kalfadhi u xaqiijiyeen ila-wareedyo. Barta Feysbuugga ee Golaha Shacabka ayaa la soo dhigay war-gelin lagu soo bandhigayo inuu jiro Kulankii Golaha ka baaqanayey ilaa 26-ka bishii hore.
Kulankan waxa uu leeyahay xiisa gaar ah, laakiin ajandaha ayaa la sheegay inuu yahay Hindisaha Xeerka Xaqsiinta Siyaasiyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS). Waxaa la rumeysan yahay inuu jiro ajande uusan Goluhu ku shaacin Feysbuuggiisa, balse lama oga iney qeyb ka tahay doodda ka dhalatay kala diristii Guddiga Maaliyadda. Sidaas oo kale, waxaan la hubin inuu Goluhu ka baaqsan doono soo hadal qaadidda arrintaas, oo la rumeysan yahay inuu Goluhu u kulmi la’aa awgeed.
Kulankan ayaa maanta dhici doonaa, kadib cabasho isdaba-joog ahayd oo ay Xildhibaannada qaar ka jeedinayeen warbaahinta, iyagoo dalbanayey in qabsoomidda kulamada Golaha lagu soo celiyo sidii hore. Sida ay ku doodayeen, uma muuqan sabab ay kulamada Goluhu u baaqdaan. Laakiin, Xildhibaannada qaar ayaa rumeysnaa in, marka la fiiriyo mugga iyo miisaanka khilaafka Golaha, ay adkeyd inuu dhaco kulanka Golaha, iyada oo ay taagan tahay kala diris Guddi Gole, laallid war-bixin uu Guddigu soo diyaariyey iyo ku kala aragti duwanaan aragtiyadeed oo arrimahaas la xiriirta, oo markii dambe ku baahday badi Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Kulamada baaqday waxa ay rakaateeyeen Hindise Sharciyeedyo kala duwan, oo Golaha horyaala, kuwaas oo qaarkood marayey heer meel-marineed, sida Hindisaha Xeerka Hanti-Dhawrka Guud ee Qaranka, oo inta soo maray aqrintii 1-aad, 2-aad iyo 3-aad la doonayey in lagu meel mariyo kulamada Golaha ee uu khilaafku dib dhigay. Deganaanshaha iyo habsimada kulamada dhaw ee Golaha waxay ku xirnaan doontaa sida uu noqdo kulanka maanta ee Golaha.
Kulanka Golaha Shacabka oo berri furmaya iyada oo uu taagan yahay khilaaf adag
Golaha Shacabka oo ay haysato hubanti la’aan ah go’aanka Guddoomiye Mursal ee khilaafka taagan
Golaha Shacabka oo ay haysato hubanti la'aan ah go'aanka Guddoomiye Mursal ee khilaafka taagan